Sidecar: Data-Driven အမေဇုံကြော်ငြာမဟာဗျူဟာများ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 1, 2019 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 1, 2019 Douglas Karr
အမေဇုံသည်ဝက်ဘ်ပေါ်ရှိအကြီးဆုံး e-commerce ဦး တည်ရာတစ်ခုတည်းသာမကကြော်ငြာကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ အမေဇုံပရိသတ်သည်အလွန်များပြီး visitors ည့်သည်များ ၀ ယ်ရန် ၀ ယ်ယူသည့်အချိန်တွင်ရုပ်သံလိုင်းကိုသွားကြည့်ခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲသည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကစတင်ခဲ့သည် အမေဇုံများအတွက် Sidecar အဆင့်မြင့် AI နှင့်သဘာဝဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနဲ့အသုံးပြုတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ ယ်သူများသိသိသာသာ ၀ င်ငွေရရှိစေရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်အခြေခံသည့်နည်းဗျူဟာများနှင့်သက်သေပြထားသောအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုလက်လီအရောင်းဆိုင်များမှကျင့်သုံးနိုင်သည် အမေဇုံကမကထထုတ်ကုန်, ထောက်ပံ့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ကြော်ငြာများပြပါ.
လက်လီအရောင်းဆိုင်များအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန် Sidecar ၏သီးသန့်အာရုံစိုက်မှုဖြင့် Amazon ကြော်ငြာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များရင်ဆိုင်နေရသောပြaddressesနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့်အဖြေတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်မှာသဘာဝဖြန့်ကျက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Sidecar အတွက်စျေးကွက်နှင့်ဖောက်သည်ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာအကြီးတန်းဒါရိုက်တာ Mike Farrell
Sidecar နည်းပညာသည်လက်စွဲစာအုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သည်၊ သတင်းပို့ခြင်းကိုလွယ်ကူစေပြီးအမေဇုန်အတွက်အခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုသော့ခတ်ရန်ကုမ္ပဏီ၏စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုမြှင့်တင်သည်။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုနာကျင်မှုမရှိအောင်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပါ - စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုမဟာဗျူဟာအသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် Sidecar ၏အလိုအလျောက်မှီခိုအားထားပါ။
အချိန်နှင့်ခန့်မှန်းချက်ကိုချွေတာပါ - ရုပ်သံလိုင်းအသစ်တစ်ခုသင်ယူခြင်း၏စိတ်ပျက်စရာများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်။ သင်၏အချိန်ကိုကြော်ငြာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမှစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာနှင့်အမ်ဇိုင်းယန္တရား၏ကျန်ကိုရွှေ့ပါ။
Cross-channel မဟာဗျူဟာအကြောင်းကြားပါ - ပိုမိုစည်းလုံးသောဗျူဟာကိုမောင်းနှင်ရန်သင်၏အခြားကြော်ငြာလိုင်းများမှ Amazon အားလွယ်ကူစွာထည့်သွင်းပါ။
သတင်းပို့ခြင်းကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေပါ - ကုန်ပစ္စည်းများသည်ကြော်ငြာသုံးစွဲခြင်းနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါ။ သင်၏နိမ့်ကျသောအရာအတွက်ကြော်ငြာကမည်သို့အထောက်အကူပြုသည်ကို အခြေခံ၍ အရေးယူပါ။
Amazon အလုပ်လုပ်ဘို့ဘယ်လို Sidecar
Sidecar နည်းပညာသည်နည်းဗျူဟာများကိုကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏သီးသန့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည်ရုပ်မြင်သံကြားမဟာဗျူဟာကိုမောင်းနှင်ရန်သင်နှင့်မိတ်ဖက်ပေးသည်။ ရလဒ်? အရှိန်မြှင့်သောရောင်းအားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သင်တိုင်းတာ။ အစီရင်ခံနိုင်သည့်ပိုမိုအားကောင်းသောယှဉ်ပြိုင်မှုအားသာချက်။
ကင်ပိန်းဖွဲ့စည်းပုံ Builder - Amazon ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ခြင်း၏ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ Sidecar သည်ကြော်ငြာအုပ်စုများကိုအလားတူစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်နိမ့်သောဖျော်ဖြေသူများအတွက်ပြန်လည်အသုံးချနေစဉ်အရောင်းရဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောစမတ်ဖုန်းများကိုထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်ထုတ်ကုန်များကိုသတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုဖွဲ့စည်းပုံကိုဖန်တီးသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲမှုများ (သို့) ထုတ်ကုန်အသစ်များထပ်တိုးလာခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်မှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဒီအလိုအလျောက်နည်းပညာသည်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
ကြော်ငြာအရည်အချင်းပြည့်မီမှုစီမံခန့်ခွဲမှု - ထုတ်ကုန်များကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများမှကိုယ်တိုင်ထုတ်ပယ်ရန်လိုအပ်မှုကိုဖယ်ရှားပါ။ မာဂျင်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်လစီများပေါ် အခြေခံ၍ ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာအရည်အချင်းပြည့်မီမှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုသည်လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှသတ်မှတ်ထားသောစီးပွားရေးစည်းမျဉ်းများကိုပြသသည်။
ရှာရန် Query Manager - ရည်ရွယ်ချက်မြင့်မားသောစျေးဝယ်သူများကိုမှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးများဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကိုအမြင့်ဆုံး။ Sidecar သည်သဘာဝဘာသာစကားအပြောင်းအလဲကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ၀ ယ်သူများအသုံးပြုသောဝေါဟာရအသစ်များကိုသင်၏ထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေရန်ရှာဖွေရေးရှာဖွေမှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အကဲဖြတ်သည်။ Sidecar သည် Amazon ၏ပလက်ဖောင်းတွင်မရရှိနိုင်သည့်ကြွယ်ဝသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အကြံပြုချက်များကိုပေးသည်။
လေလံစီမံခန့်ခွဲမှု - အသိဉာဏ်ရှိသော၊ အလိုအလျောက်လေလံဆွဲသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပြုလုပ်ပါ။ အမေဇုံမှအဆိုပြုထားသောလေလံနှုန်းသည်များသောအားဖြင့်စစ်မှန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှမလိုအပ်သောအပြောင်းအလဲများကိုပြုလုပ်ရန် ဦး ဆောင်နေသည်။ Sidecar သည်ကုန်ပစ္စည်းတိုင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေရန်ကြော်ငြာအုပ်စုနှင့်သော့ချက်စာလုံးတိုင်းအတွက်လေလံများကိုပုံမှန်ပြောင်းလဲသည်။
သတင်းပို့ခြင်းနှင့်အချက်အလက်ကြည့်ခြင်း - အမေဇုံဒေတာ၏အလားအလာကောင်းများကိုသော့ဖွင့်ပါ အမေဇုံ၏သတင်းပေးပို့မှုအကန့်အသတ်ရှိခြင်းကြောင့် Sidecar နည်းပညာသည်တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်နှင့်တစ်လနှင့်တစ်လနှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်သောကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ဒါကကြော်ငြာကကြီးထွားမှုကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။
အမေဇုံများအတွက် Sidecar ပံ့ပိုးမှုပါဝင်သည့်ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများဖြည့်ဆည်းပေးသည် စျေးဝယ် နှင့် ပေးဆောင်ရှာဖွေရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး Google နှင့် Bing တို့အတွက်သာမကစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုပါပြုလုပ်သည် Facebook / Instagram နှင့် Pinterest.
Sidecar ၏ကျွမ်းကျင်သူများသည်အခွင့်အလမ်းအသစ်များကို Amazon ၌အခမဲ့၊ အခမဲ့တာဝန်ယူမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအားဖော်ထုတ်ပါစေ။
Tags: အမေဇုံစပွန်ဆာပေးအမှတ်တံဆိပ်အမေဇုံကမကထထုတ်ကုန်Amazon အဘို့အ sidecar